-Guddoomiya Gobolka Banaadir ahna duqa Caasimada Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish), waxaa uu maanta kormeer ku tagay xarumo ay kamid yihiin Biyaasa Liibaro iyo xarunta Sheybaarka Dhismaha ee Dowlada Hoose Xamar. Ujeedka kormeerka Gudddoomiyaha ayaa lagu sheegay in uu ka mid ahaa ugu kuur galida bilicda Caasimadda iyo howlaha muhiimka ah oo ay xarumahaasi bulshada u haayan. Dhinaca kale, Guddoomiye Cumar Filish ayaa inta uu kormeerka ku jiray waxaa uu faray Guddoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir uu Faray in ay mas’uuliyad gaar ah iska saaraan ilaalinta nadaafada iyo bilicda goobaha muhiimka ah iyo kuwa kale. – XAMAR POST
-Guddoomiya Gobolka Banaadir ahna duqa Caasimada Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish), waxaa uu maanta kormeer ku tagay xarumo ay kamid yihiin Biyaasa Liibaro iyo xarunta Sheybaarka Dhismaha ee Dowlada Hoose Xamar. Ujeedka kormeerka Gudddoomiyaha ayaa lagu sheegay in uu ka mid ahaa ugu kuur galida bilicda Caasimadda iyo howlaha muhiimka ah oo ay xarumahaasi bulshada u haayan. Dhinaca kale, Guddoomiye Cumar Filish ayaa inta uu kormeerka ku jiray waxaa uu faray Guddoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir uu Faray in ay mas’uuliyad gaar ah iska saaraan ilaalinta nadaafada iyo bilicda goobaha muhiimka ah iyo kuwa kale.
By Mohamed Abdi Last updated Feb 27, 2022
Guddoomiya Gobolka Banaadir ahna duqa Caasimada Muqdisho Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish), waxaa uu maanta kormeer ku tagay xarumo ay kamid yihiin Biyaasa Liibaro iyo xarunta Sheybaarka Dhismaha ee Dowlada Hoose Xamar.
Ujeedka kormeerka Gudddoomiyaha ayaa lagu sheegay in uu ka mid ahaa ugu kuur galida bilicda Caasimadda iyo howlaha muhiimka ah oo ay xarumahaasi bulshada u haayan.
Dhinaca kale, Guddoomiye Cumar Filish ayaa inta uu kormeerka ku jiray waxaa uu faray Guddoomiyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir uu Faray in ay mas’uuliyad gaar ah iska saaraan ilaalinta nadaafada iyo bilicda goobaha muhiimka ah iyo kuwa kale.
In ka badan Boqol ruux oo baxsad ka ah dagaalka ka socda Ukraine oo u tallaabay Xadka Poland.
M/weynaha Ruushka oo ku gacan seeray in dhigiisa Ukraine uu kula kulmo Belarus.